ဗွီဒီယို LED display နံရံ၌ရေလှိုင်းများဖယ်ရှားပါ - တရုတ်ထိပ်တန်း ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုကိုမြို့ရိုးကိုစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
မိုးလုံလေလုံဇာတ်စင် display ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ပြင်ပဇာတ်စင် display ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
HD အနိမ့်အစေး led display ကို
ပွင့်လင်း led display ကို
အကအခုန် LED ပြသမှု
ဦး ဆောင်ဗီဒီယို controller ကိုစနစ်
ငှားရမ်း LED display ကိုအမှုပေါင်း
သေးငယ်တဲ့အစေး display ကိုအမှုပေါင်း
အားကစား LED display ကိုအမှုပေါင်း
ဂုဏ် & လက်မှတ်များ
ဗွီဒီယို LED display နံရံ၌ရေလှိုင်းများဖယ်ရှားပါ
သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့မဟုတ်ကင်မရာများကို LED ဖန်သားပြင်များယူရန်သုံးသောအခါ, သူတို့ကဓာတ်ပုံတွေမှာရေလှိုင်းတွေ၊ လိုင်းတွေကိုစကင်ဖတ်လေ့ရှိတယ်, ၎င်းသည် LED display များ၏အရည်အသွေးအတွက် ၀ ယ်သူအားစိတ်ပူစေသည်. သို့သော်, ဤဖြစ်စဉ်များသည် LED display ကိုယ်တိုင်ကြောင့်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်ကင်မရာ (သို့) မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးသည့်အခါ focal length အားဖြင့်. ရေလှိုင်းအကြောင်းအသိပညာကိုလူသိများအောင်လုပ်ကြပါစို့ (အံသွားပုံစံ) ဒီနေ့.
ရေလှိုင်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော arc ပျံ့နှံ့မှုအခြေအနေကိုတင်ပြသည်. စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်မျဉ်းသည်အလျားလိုက်အနက်ရောင်အစင်းကြောင်းမျဉ်းဖြစ်သည်, အဓိကအားဖြင့် display screen ၏ refresh နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးကင်မရာကဖမ်းယူပြသသည်!
2. သိပ္ပံအမည် “ရေလှိုင်း” ဟုတ်တယ် “Moiréအကျိုးသက်ရောက်မှု”
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ထားသောမြင်ကွင်း၌သိပ်သည်းသောပုံစံရှိလျှင်, နားမလည်နိုင်သောရှင်းပြနိုင်သောရေလှိုင်းများကဲ့သို့အစင်းကြောင်းများပေါ်လာတတ်သည်. တိုတိုပြောရရင်, moire ပုံစံသည် beat ခြားနားချက်၏အခြေခံသဘောတရားကိုပေါ်လွင်စေသည်. သင်္ချာနည်းနဲ့ပြောတတ်တယ်, တူညီသောလှိုင်းများနှင့်တူညီသောကြိမ်နှုန်းများနှင့်တူညီသောကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုကို superimposed လုပ်သောအခါ, synthetic signal ၏ amplitude သည် frequency နှစ်ခုကြားခြားနားချက်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲလိမ့်မည်.
က. ကွဲပြားခြားနားသောနေရာဒေသကြိမ်နှုန်းအနည်းငယ်ရှိသောအစင်းနှစ်ခုသည်ဘယ်ဘက်အဆုံးတွင်တူညီသောအနက်ရောင်မျဉ်းတန်းရှိသည်. တူညီသောအကွာအဝေးကြောင့်ဖြစ်သည်, မျဉ်းကြောင်းများသည်တဖြည်းဖြည်းညာဘက်သို့တိုက်ဆိုင်နိုင်သည်.
ခ. ထို့ကြောင့်အစင်းနှစ်ခုသည်ထပ်နေသည်, အနက်ရောင်မျဉ်းသည်တိုက်ဆိုင်နေသောကြောင့်ဘယ်ဘက်တွင်အဖြူရောင်မျဉ်းတန်းကိုမြင်နိုင်သည်. ညာဘက်ခြမ်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းညှိသည်, အဖြူရောင်မျဉ်းသည်အနက်ရောင်မျဉ်းကိုရင်ဆိုင်သည်, ထပ်နေသောရလဒ်သည်လုံးဝမည်းလာသည်. အဖြူရောင်မျဉ်းများနှင့်အနက်ရောင်အပြောင်းအလဲအားလုံးရှိသည်, အံသွားပုံစံများကိုဖွဲ့စည်းခြင်း.
ဂ. အုပ်စုနှစ်ခုသည်အစင်းကြောင်းများလုံးဝတိုက်ဆိုင်သောအခါ, ပုံမှန်အံသွားပုံစံကိုသင်မြင်နိုင်သည်.
4. ပြကွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် moire ဖြစ်စဉ်
LED display screen ကို RGB သုံးရောင်ယူနစ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, display screen ပေါ်တွင်အညီအမျှဖြန့်ဝေသည်.
မှတ်စု: LED display screen ၏ pixel distribution သိပ်သည်းဆသည် CCD ဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သောကြားကာလများသာဖြစ်သည်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာသည်အချို့သောသိသာထင်ရှားသည့်ရလဒ်များကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနေဆဲဖြစ်သည်, သို့သော်၎င်းသည်မမှတ်မိနိုင်သောမီးခိုးရောင်အတိုင်းအတာများကိုလည်းထည့်သွင်းလိမ့်မည်. နှစ်ခုပေါင်းလဒ်သည်ပုံမှန်လိုင်းများဖြစ်လာလိမ့်မည်, ၎င်းသည်အမြင်အာရုံကိုအခါအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်စေသည်.
LED display video wall ၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအချက်သုံးချက်
ဗွီဒီယို LED display နံရံ၌ရေလှိုင်းများဖယ်ရှားပါ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် ဗွီဒီယို LED display နံရံ၌ရေလှိုင်းများဖယ်ရှားပါ
LED display video wall ၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအချက်သုံးချက် မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED display video wall ၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအချက်သုံးချက်
LED display ရဲ့စျေးနှုန်းကမှန်ကန်တဲ့ display ကိုရွေးချယ်ရာမှာအချက်တစ်ချက်လား? မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED display ရဲ့စျေးနှုန်းကမှန်ကန်တဲ့ display ကိုရွေးချယ်ရာမှာအချက်တစ်ချက်လား?
ဇာတ်စင်နောက်ခံ LED display ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လို? မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် ဇာတ်စင်နောက်ခံ LED display ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လို?
Professional က LED display ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်သောပြသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့.
သေးငယ်တဲ့အစေး display ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ဗီဒီယို Controller စနစ်
ရှေ့ဝန်ဆောင်မှု p3.91 p4.81 p5.95 p6.25 ပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုနံရံ
ရှေ့မျက်နှာပြင်ပွင့်လင်းမှုအပြည့်ရှိအရောင်ရှိသောအပြင်ဘက် LED မျက်နှာပြင်
P4 P5 P6 P8 P10 သည်ရေစိုခံပြင်ပတွင်တပ်ဆင်ရန်အတွက် display screen video video wall ဖြစ်သည်
မူပိုင်ခွင့်အားလုံး 2021 © ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ